Anopupuma - Henan Coal Research Keming Mechanical Co., Ltd.
Furo kongiri, aizivikanwawo aircrete, foamed kongiri, foamcrete, cellular lightweight kongiri kana kuderedzwa arambe achirema kongiri, Inonzi samende kunobva slurry, ane zvishoma 20% (pa vhoriyamu) furo entrained kupinda epurasitiki dhaka.  Sezvo kunyanya hapana zvinonyadzisa uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. rinoshandiswa kuti kugadzirwa furo kongiri yakarurama izwi aizonzi dhaka pachinzvimbo kongiri; zvinogona kunzi "foamed simende" uyewo. The arambe achirema furo kongiri Kazhinji zvichisiyana makirogiramu 400 / m³ kusvika 1600 makirogiramu / m³. The arambe achirema unowanzovapo nemauto dzinomiririra zvakazara kana chikamu yakaisvonaka uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. furo.
Foamed kongiri unosanganisira munhu slurry esimende achibhururuka nemadota kana jecha uye mvura, kunyange zvazvo dzimwe bhizimisi vanokurudzira wakachena ejecha mvura pamwe anopupuma mutumwa kuti lightweight chaizvo mixes. slurry Iri mberi hwakakanyiwa chakaita zvokugadzirwa aerated furo mune chesamende vaiitawo chirimwa. The furo akasikwa kushandisa inopupuma mumiriri, hwakakanyiwa nemvura uye mhepo kubva jenareta. The anopupuma muiti vaishandisa anofanira kukwanisa kubereka mhepo matema rurefu azvipire rakatsiga, nemishonga mumuviri uye zvemakemikari dzinotsanagura nokusanganisa, achiisa uye kuomesa.
Foamed kongiri muvhenganiswa anogona kudirwa kana pumped kupinda anoumba, kana zvakananga kunyika STRUCTURAL okunze. The furo inoita slurry kuyerera nokuda thixotropic maitiro ari furo matema, kuubvumira kuva nyore akadurura kupinda muchimiro vakasarudzwa kana mould.The viscous zvinhu zvinoda maawa 24 kuti zvigare (kana sezvo shoma sezvo vaviri maawa kana chiutsi akaporesa pamwe kutonhora anosvika 70 ° C kuwedzera muitiro.), zvichienderana variables kusanganisira ambient tembiricha uye mwando. Kamwe Rakasimbisa, iyo yakaumbwa zvibereko hungabudiswa kubva kwayo chakuvhuvhu.
Foamed kongiri inogona kugadzirwa nezvinhu chakaoma densities 400 kusvika 1600 makirogiramu / m³, pamwe 7-zuva pakugona anenge 1 kusvika 10 N / mm² azvaitwa. Furo kongiri ndiwo moto nemishonga, uye ayo chafariz uye acoustical kuputira zvivako kuti rakanakira zvakawanda zvinangwa, kubva insulating uriri uye matenga edzimba, kuti chive chisina zvachinobatsira zvekupfakira. Uyewo kunyanya runobatsira mugoronga kudzorerwa.
A zvishoma zvikumbiro furo kongiri vari:
Precast rusvingo okunze / ukomba
vakakanda-mu-situ / chakakandirwa-mu-nzvimbo masvingo
insulating muripo achiisa
kuputira uriri screeds
kuputira denga screeds
mungarava mugove akazadza
Sub-chawo ari mikuru
achizadza pamusoro mukaha Zvidhinha
prefabricated kuputira mapuranga
Furo kongiri chinhu-chinja chivakwa zvinhu nokungoti kugadzirwa nzira kuti achiri chipa zvichienzaniswa autoclave aerated kongiri. Furo kongiri yeimwe utilizing nhunzi dota iri slurry kunovhengana riri isingadhuri achiri, uye ane zvishoma Environmental Impact. Furo kongiri anogadzirwa akasiyana-siyana densities kubva makirogiramu 200 / m³ kusvika 1,600 makirogiramu / m³ zvichienderana kushanda. Vakareruka arambe achirema zvigadzirwa anogona racherwa inosiyana. Nepo chigadzirwa anoonekwa rudzi kongiri (pamwe mhepo matema kutsiva uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa.), ayo yakakwirira chafariz uye acoustical insulating unhu kuti akasiyana chaizvo kushanda pane kwakajairika kongiri.
Recent dzinokura kukura
Kusvikira makore gumi apfuura, furo kongiri rave sechinoitika simba uye vasiri hunogara dzakakwirira shrinkage unhu. Izvi imhaka kusagadzikana furo matema kwakaguma furo kongiri rine ehupfumi kukodzera hwokubereka yakaderera chaizvo arambe achirema (makirogiramu Asingasviki 300 / m³ yakaoma arambe achirema) uyewo mutoro akatakura STRUCTURAL mafomu. Saka zvinokosha kuti tive nechokwadi kuti mhepo entrained kupinda foamed kongiri zvirimowo mu mudanga panguva duku chaizvo dzakafanana matema kuti tirambe kuchakasimba uye yoga, uye regai saka awedzere permeability pamusoro samende namatidza pakati voids.
Kukura chakaita zvokugadzirwa-enzayemu inobva achipupuma furo nevasori, furo kutsiga dzekugonesa admixtures uye kushandiswa furo urwu, nokusanganisa uye kupomba midziyo kwakavandudza kutsiga furo saka foam kongiri, zvichiita kugadzira sezvo chiedza sezvo makirogiramu 75 / m³ density.The enzayemu ine zvikuru vanoshingaira mapuroteni ose noutachiona mavambo uye haina inobva asingakwezvi mapuroteni hydrolysis.In achangopfuura makore foamed kongiri rave kushandiswa zvikuru munyika migwagwa, zvivako zvokutengeserana, njodzi vapore zvivako, zvikoro, Apartments uye dzimba kuitika munyika dzakadai Germany, USA, Brazil, Singapore, India, Malaysia, Kuwait, Nigeria, Botswana, Mexico, Indonesia, Libya, Saudi Arabia, Algeria, Iraq uye Ijipiti.